मलमास के हो ? मलमास कल्ले बार्नु पर्छ ? – Kandara News
मलमास के हो ? मलमास कल्ले बार्नु पर्छ ?
प्रकाशित : २०७७ भदौ ३१ गते १६:३३
लेखक ज्योतिष विद्यार्थी नारायण अाचार्य एउटै महिनामा दुईवटा औंसी परे भने त्यसलाई मलमास भनिन्छ। असोज १ देखि ३० गते सम्म मलमास परेको छ
अधिक मासको निर्णय सूर्य सड्क्रान्न्तिको आधारमा गरिन्छ । जुन महिनामा सूर्य सड्क्रान्न्ति हुँदैन त्यसलाई अधिक मास भनिन्छ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार जुन चन्द्रमास भित्र सूर्य सक्रान्ती पर्दैन त्यसलाई अधिकमास भनिन्छ ।
नोट : अहिलेको मलमास अन्य बर्षको जस्तै साधारण छ । त्यसैले एकपटक बारेकाले अहिले बार्नु पर्दैन ।।
नव बिवाहित महिलाले पहिलो पटक बार्नुपर्ने हुन्छ ,
(नोट: कस्को लागि बार्ने ?:सासू-ससुरा-श्रीमान-जेठाजु )
व्यक्ति बिशेष भन्दा पनि मलमासमा श्रीमानको घरधुरीमा बस्न र देख्न हुन्न त्यसैले यो समय नव बिवाहित महिलाले घरबाट पर आफ्नो माईती घर वा माईत तिरको मावली सानिमा घरमा बस्न हुन्छ ।